Ungava sei nyanzvi yekutengesa? | ECommerce nhau
Ungava sei nyanzvi yekutengesa?
Jose Ignacio | | eCommerce, ECommerce kudzidziswa
Kuve nyanzvi yekutengesa ndechimwe chezviitiko zvehunyanzvi zvinogona kukubatsira iwe zvakanyanya manejimendi mubhizinesi rako redhijitari. Chero zvayakaita uye zano rawakapa kuti riitwe. Nekuti nyanzvi yekutengesa ndeyekutanga kune vese nyanzvi ichave iri mukutungamira kwekushambadzira kwezvigadzirwa, masevhisi uye zvinyorwa zvinopihwa nekambani yako yedhijitari.
Asi izvo zvatiri kuzotarisana nazvo kubva zvino zvichienda mberi ndiyo nzira yaunofanirwa kuita kusvika iwe wave nyanzvi yekutengesa uye kuti kubudirire kana kwete kweiri basa rehunyanzvi rauri kuita parizvino kunobva pane. Sezvauchaona, chinzvimbo chebasa chakazvipira kwazvo kumhedzisiro yekupedzisira yekambani uye icho chichaitwa mukubatana kwakazara nemadhodhi edhizaini ekambani.
Kune rimwe divi, chimwe chinhu chinogara chakaratidza nyanzvi yekutengesa inyaya yekuti ndiye munhu anogadzira marongero ekushambadzira ane chinangwa chikuru kwikwidzana uye inobatsira mune rebhizinesi chikamu chekambani yedhijitari. Iyo yepakati pani iyo yakakosha zvakakwana kuti ishandiswe uye nemazvo mashandiro ebhizinesi mutsetse, chero chingave chiri uye pasina kukwana kwematanho.
1 Nyanzvi yekutengesa: matipi ekuve akanakisa
2 Unyanzvi hunofanirwa kuunzwa nehunyanzvi hwekutengesa
3 Ipa zvimwe uye zvine hunyoro kutaurirana zvinhu
Nyanzvi yekutengesa: matipi ekuve akanakisa
Muzviitiko zvese, iyo yekutanga yekubheka iyo iwe yaunofanirwa kuzadzisa kubva zvino zvichienda ndeye kubatanidzwa kwakazara mune bhizinesi modhi. Mupfungwa yekuti kupfuura kuve nezvigadzirwa zvakanaka mumaoko ako, zvakakosha ratidza mufananidzo wekuvimbika uye chivimbo chinokutendera iwe kukunda vatengi uye kuvaita kuti vatenge izvo zvauri kupa.
Naizvozvo, imwe yemakiyi pane echikamu chevatengesi ndeyekuvimbika kwavo nevamwe. Iko hakuna chikonzero chekupa humwe hunhu kana pakupedzisira iwe usingape kuvimbika uye chengetedzo kune vako vatengi kana vashandisi. Ndihwo hunhu hwekutanga hwavanofanira kupa kana iwe uchinyatsoda kuve nyanzvi yekutengesa sezvo humwe hunhu huchauya vega uye nekudzidza zvishoma.
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo zvaunofanira kuongorora kubva panguva ino zvichienda mberi ndicho chine chekuita nekusarudza nzvimbo yako yekuita. Uye kune izvo, hauzove nesarudzo kunze kwekufungidzira kuti iyo yakanyanya kukamurwa bhizinesi niche yako, zvichave nyore kugadzira nzira dzekutaurirana dzakasimba. Nechinangwa chakaiswa mukati wedzera huwandu hwekutengesa mune zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinyorwa. Asi ngazvive kuburikidza nezano rakarongwa rakakodzera kune chimiro chezvigadzirwa zvaunoda kutengesa. Izvi ndezve mushure mezvose chishuwo chakanyanya kupfuura chekutanga mukirasi iyi yevanamato mubazi rekutengesa.
Unyanzvi hunofanirwa kuunzwa nehunyanzvi hwekutengesa
Muzviitiko zvese, nyanzvi yehunhu uhwu inofanirwa kusangana nezvimwe zvidiki zvinodiwa kuti vaite mabasa avo mukati mekambani zvakanyatsonaka. Ichave iri nyaya yekuzviongorora zvishoma nezvishoma kuti uone kana pakupedzisira iwe uine nhoroondo yakakwana yekuita aya chaiwo mabasa mune ino chikamu. Kubva pane ino maonero, inguva yekutsanangura kuti ndeapi hunyanzvi hunofanirwa kupihwa neanotengesa. Iwe unoda kuvawana here kubva zvino zvichienda mberi? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti ivo vanofanirwa kuziva.
Mutengesi akanaka anofanira pamusoro pezvose ave nekutsunga uye maitiro. Une kutsunga kwakakwana kutengesa chigadzirwa chako uye unosangana nezvinangwa zvishoma mukati mekambani yako. Zvakare nekutsungirira kwazvo kuti ubudirire kutarisana nematambudziko ese aungasangana nawo munzira yako uye ndeapi angave mazhinji uye akasiyana hunhu.
Kuvimba nezvaunogona iwe pachako
Mutengesi akanaka haafanire kungova nekuvimba nemunhu wake, asi muchigadzirwa chaari kushambadzira kune vatengi. Nechinangwa chekugadzirisa matanho anogona kunge akaomarara uye kunyange akaomarara mukusimudzira kwavo. Iwe unofanirwa kuratidza kuvimba muhukama hwaunochengetedza nevatengi vako, asi kubva panzvimbo chaiyo uye usamboita kunge wakamanikidzwa. Iyo yekupedzisira inogona kuratidza yakaipa muenzaniso kune rimwe bato mune bhizinesi maitiro. Naizvozvo, zviri nyore kuti usazvikanganwe kubva zvino zvichienda mberi.
Iva akatendeseka muhukama
Chero zvazvingaitika, hazvigone kukanganwika kuti mutengesi akanaka anofanira pamusoro pezvose kuve munhu akatendeka uye akatendeka. Kusvika padanho rekugadzira mwero wepamusoro wekunzwira tsitsi, akazviita nechimwe chikamu chebhizimusi maitiro. Mutemo wegoridhe mune idzi kesi uye usingatombokundikana unobva pakushandisa inotevera meseji: gara uchiendesa izvo zvaunovimbisa.
Kana kutengeswa kwakanaka kuchibva pane chimwe chinhu, zviri kuburikidza nekunyengetedza uko kunoitwa mukushambadzira kwacho. Nyanzvi yekutengesa haifanire kunge ichishaikwa mune ino kukodzera uye inoperekedzwa nedosi yakanaka, tsime, zvirinani pane zvirinani kune rake hunyanzvi zvido. Zvakanyanya kuita kuti mutengi asavimbe zvakanyanya kuti chigadzirwa chako ndicho chakanakisa uye kuti havafanirwe kupotsa mukana uno wekutenga chigadzirwa, sevhisi kana chinhu chiri kutengeswa. Kunyangwe kunyatso nyengerera zvinogona kutora nguva yakati rebei kupfuura zvakafanira nekuti iwe unofanirwa kuziva mamirire ezvinhu akakodzera kuti asvike kupedzisa maitiro ekutengesa. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi kana iwe usiri kuda kukundikana mukuyedza.
Ipa zvimwe uye zvine hunyoro kutaurirana zvinhu
Kutaurirana ndeimwe yemasangano akajairika aunofanirwa kupa kuti uwane kutengesa kwaunenge waronga. Kubudikidza nenzira dzakasiyana idzo dzechokwadi dzinogona kubatsira kwazvo mumabasa ako ehunyanzvi. Kwete pasina, kubudirira kana kwete kwekushambadzira kunoenderana navo. Kutanga kubva kune zvimwe zvinhu muprofita yako yehunyanzvi izvo zvichave zvakakosha kuti iwe upe kana iwe uchida kuve mumwe wevatengesi vakanakisa mukambani yako. Semuenzaniso, mune zvinotevera zvatiri kuzokufumura pazasi:
Iwe haugone kupa ichi chakakosha kukosha, asi kana iwe usingazive nzira yekuzvinyatso kuratidza, hapana mubvunzo kuti zvichanyanya kunetsa kuzadzisa chinangwa chako chiripo. Kubva pane iyi nzira yakajairika, haugone kupokana panguva ino kuti mushambadzi akanaka ane kutaurirana kwakanaka uye kureruka kwekutaura. Iwe unokwanisa kutaura zvakajeka mazano ako, uye une izwi rakanaka remuromo kutaura zvinhu zvaunoda kutaura nenzira kwayo uye zvinowirirana. Uye zvakare, zvakakosha kwazvo kuti kubva ikozvino uchiedza kuti ugamuchire zvido zvavo, kunyangwe usingabvumirane nazvo pakutanga. Mutauro unofanirwa kuve chimwe chezvishandiso zvaunofanira kushandisa kutengesa zvigadzirwa zvako. Kusvika padanho rekuti iro rinogona kukuburitsa kubva kune anopfuura rimwe dambudziko mune ino maitiro. Iwe haufanire kuregeredza, nekudaro, hupfumi hwemutauro mune idzi kesi sezvo ichi chingave chiri chakanyanya kuvimbisa kusimudzira kutengeswa kwakanaka pane kwako chikamu.
Kupfeka nenzira kwayo kunobatsira nguva dzose
Iwe unofanirwa zvakare kupa kukosha kukuru kune chimiro chemuviri chekuvapo kwako mukutaurirana neumwe mubato. Izvo chaizvo hazvisi zvekuenda kwako senge wekupedza modhi. Kana zvisiri, pane kudaro, kuti iwe unoremekedza mune zvemagariro mafomu uyezve kuti wadhirobe chikamu chavo chero nguva. Kusvika padanho rekuti rinogona kupa rimwe bato chivimbo chidiki, uye zvakawanda zveizvo iwe pachako pakutanga zvaunotenda. Iyo ndiyo yakanakisa tsamba yekuvhara kuti utange kusangana nezvinoonekwa zvakaiswa pakutengesa zvinosvika kumagumo mune akanakisa ako mamiriro. Kana iwe uchizoona mutengi mumwedzi mishoma inotevera zvichave zviri nani kana iwe wakapfeka zvakanaka. Nekufamba kwenguva iwe uchatitenda isu kunyanya.
Ziva maitiro ekuteerera kune mutengi
Haufanire kunge uchingotaura nguva dzese uchirikuda, asi pane chakapesana chinhu chakangwara kuziva kuziva kuteerera kune chimwe chikamu chezvekutengesa. Saka kuti nenzira iyi, mutengi wako ane nzira yakafanira uye inoenderana uye anogona kuunza chibvumirano kuzadzikiswa pamberi penguva. Nemutengo wakawedzerwa wauchazoshaya zvekuita kunze kwekuve nekwaniso yekutaura zvakajeka mazano ako uye kuti rimwe bato rinzwisise zvaunoda kuita kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Pane dzakawanda nguva iwe unosvika pamhedziso yekuti zvinonyanya kukosha kuziva kuteerera mutengi kuti atengese chigadzirwa pane kutaura zvakawanda. Ichi chinhu icho iwe chaunodzidza neicho chiitiko chakaunganidzwa mune iri basa, chero chikamu chebhizinesi chaunosanganiswa.
Zvekuti pakupedzisira, uye kana aya matipi avepo, iwe unosvika pachinangwa chekupedzisira icho chisiri chimwe kunze kwekuita kutengesa kwawanga uchitsvaga kubva pakutanga. Kunyangwe pakutanga, izvi zvinogona kunge zvisiri nyore maitiro sezvawaitarisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Ungava sei nyanzvi yekutengesa?
Matipi ekuwana vatengi vako vekutanga
Nongedzo kune itsva SEO uye SEM maitiro emabhizimusi epamhepo